I-2020 yokufika okusha kwe-panties umzimba we-shaper seamless abesifazane abangabonakali i-sexy butt lifter panties tummy control slimming body shaper
I-hip-up eyi-one-3D, ngokusho kwesakhiwo okhalweni lomuntu, isonga imichilo ngezindlela ezahlukahlukene ngokusebenzisa izingxenye ezihlukile zangaphansi. Izinto ezibonakalayo eziphezulu kakhulu, ezingavinjelwe, azikho ingcindezi, akukho okushelelayo. Amabhulukwe anemigqa emincane kanye nenhle, ukungezwani okuzinzile, nobulukhuni.
Ukuthengiswa okushisayo okusha kwe-2020 okusha kuphethe ama-buttocks panties tummy control butt kuphakamisa amabhulukwe e-booty shaper
Ukuthengisa okuqondile kwefektri, isisu esisha sangemva kokubeletha, okhalweni odaluliwe, amabhulukwe e-hip, ibhulukwe lomzimba okhalweni ophakeme, okugqamisa ijika labesifazane, elithandekayo nelithandekayo. Idizayini ye-hem yenza indwangu iqinile futhi ihlale isikhathi eside.
I-YI YUN Hot yokuthengisa okushubile okhalweni okusongela okhalweni kuthwala ama-buttocks pad okuphakamisa panties
Amaphinifa wesipanji namabhulukwe afanelekile okhalweni, amaphakethe akhiwe ngaphakathi, amaphakethe wesiponji esikhiphekayo, kulula ukuwahlanza. I-high pad-hip pad pad kakhulu futhi ingaphefumula, futhi ngeke ikhubazeke lapho ihlala. Umklamo ongamaki emaphethelweni okhalweni, anti-ekuqaleni, anti-rolling.
Ukuthengiswa okushisayo kwe-Amazon nosayizi okuphezulu I-Waist Butt Lifter Panty amandla abesifazane i-handformwear tummy control slimming body shaper
Ubukhulu besisu bokuphakamisa amabhulukwe, ibhulukwe eliphakeme likalobo, isilinganisi esilinganiseke se-sexy, ingcindezi ephindwe kabili esiswini, imigqa emithathu nama-bark ayisishiyagalombili, ukwakheka kwesimo kwesisu. Indwangu ephezulu kakhulu, hhayi iqinile, ibutha ngempumelelo amafutha ngokweqile, amaphakethe wesiponji amane ukusiza umzimba wakho ukwakheka
Unkulunkulukazi wangokwezifiso we-lala abesifazane abangasemuva strapless bra reusable self adhesive bamba up up Silicone bra
I-Lace-up iqoqa isandla se-bionic, izimpiko ezimise okwezimbali, ukuhlangana okunamandla, isikhundla esikhulu esenziwe nge-arc, esongelwe ngaphansi kwamafutha wezikhali, ukuthuthukiswa kwendebe ngokushesha, intambo yomdwebo ongu-8-hole, umklamo ophefumulayo ngaphandle kweglue. I-Bio-silicone inamathele kahle, kulula ukuyinamathisela futhi akukho lula ukuyiwela.
I-Plus size Women Butt Lifter Shaper Bum Lift Pants Buttocks Enhancer hip pad pad tummy control slimming body shaper
I-pad sponge eyakhelwe ngaphakathi enkungu ephakeme yenza okhalweni lwe-plump luqonde futhi luqonde. Indwangu ebushelelezi engekho bushelelezi, ethambile futhi engaphefumula, amabhulukwe e-boxer empeleni awubushelelezi, ukwakheka okungashintshi komphetho okhalweni, i-anti-scratch, ne-anti-rolling.